Njem Ego | ThatsLuck.com
Dịka ị nwere ike ịghọtaworị sọftụwia ọhụrụ roulette ahụ Njem Ego n'echiche dabere na nne nke usoro akụnụba niile iji merie roulette, ma ọ bụ martingale.
La martingale ọ bụ akụkụ nke klaasị azum eji eme ihe n'ịgba chaa chaa nke malitere ma hụ mgbasawanye kasịnụ ha na narị afọ nke XNUMX France.
Ezubere nke kachasị n'ime atụmatụ ndị a, martingale, emere maka egwuregwu dị ka isi ma ọ bụ ọdụ nwere mkpụrụ ego., nke nyere maka mmeri nke nzọ ahụ ma ọ bụrụ na isi na ọnwụ ma ọ bụrụ ọdụ.
Martingale choro ka onye ihe egwu gha okpukpu okpukpu okpukpu abuo mgbe o ghachara, ya mere na mmeri mbu weghachite ihe ojoo nile gara aga tinyere mmeri kariri nke mbu.
Na-eche na onye ọkpụkpọ nwere oke isi obodo enweghi ngwụcha, yabụ na ọ na-enwe ike ikpuchi nzọ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ ga-efu, ọ ga-ekwe omume ikwenye enweghị atụ nke atụmatụ a, ebe ọ bụ na n'oge na-adịghị anya ọ ga-apụrịrị isi, ma ọ bụ Red dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na anyị atụle egwuregwu nke Roulette.
Agbanyeghị, n'eziokwu, ọ nweghị onye ọkpụkpọ nwere ụdị nnweta akụnụba a iji merie uto nke oke osisi ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ntụgharị efu na nke a, anyị ga-agbakwunye oke nke nzọ site na casinos niile dị n'ụwa , ma nke oma ma nke ntaneti.
Usoro zuru oke
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na martingale na-eduga mbibi onye ọkpụkpọ maka ebumnuche ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ọ bụkwa eziokwu na ọ bụ naanị sistemụ na enweghị isi obodo ma ọ bụ oke oke ka amatala na 100% ga-aga nke ọma.
Tupu ichepụta ihe ọhụrụ roulette software Njem Ego Ajụrụ m onwe m: ọ ga - ekwe omume ịtọlite ​​usoro egwuregwu nke dabere na otu ụkpụrụ dị ka martingale na nke na - enweghị isi ego ma ọ bụ oke osisi?
N'ezie, igodo (ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otu n'ime igodo ndị ga-ekwe omume) iji merie na roulette ga-abụ ime ka 25 ma ọ bụ 26-stroke martingale na-egwu egwu.
Ma gịnị ka ịme martingale na-atọ ụtọ?
Otu ihe dị mkpa m mụtara na afọ ndị a nke mmemme bụ na n'ezie na-agbalị iji merie ị ga-akpa ịghọta ihe mere ị na-ejighi.
Site na martingale ị tufuru tumadi maka ebumnuche 3:
1. nnwere onwe nke onye roulette spins (ihe mmewere fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ na-eleghara anya);
► 2. ịgba chaa chaa nke ịgba chaa chaa;
3. oke ịgba egwu player.
Malite na nyocha nke oke ato a dị mfe mana enweghị ike imeri, edobela m Njem Ego dị ka ụdị Gps na-agagharị, nke na-amalite site na ntọala mbụ (the ụlọ akụ maka otu egwuregwu oge), ị na-eduzi onye ọkpụkpọ ahụ gaa ebe ikpeazụ ha, ya bụ mmeri achọrọ.
Njem toga Mmeri
Tupu ịkọwa otu esi eji ya Njem Ego, Aga m akọwa ihe echiche ya dabeere: na omume mgbe anyị na-egwu a martingale anyị na-eme ihe ọ bụla ma okpukpu abụọ na nzọ na onye ọ bụla atụ ogho furu efu, ruo mgbe anyị merie ndị bụ isi nke nzọ.
Nyochaa cha cha cha cha n’otu n’otu, anyi puru ihu na ha nile n’eti nzo puru iche ihe dika 50% (48,65% dikwa kpomkwem) ma nweere onwe ha (ebe 1 nke ihe edere n’elu), n’echiche na ha abughi anyị nwere ike ịnwe ụfọdụ ozi bara uru site na nsonaazụ ndị gara aga iji setịpụ nzọ anyị ọzọ.
Ọ dị mma, ajụrụ m onwe m: enwere uzo nzọ ndị ọzọ nwere otu ụzọ nkwụnye ụgwọ nke ihe dị ka 50%, mana nke ahụ anaghị agba otu otu egbe na-eduga na ịgba nzọ abụọ?
Azịza ya bụ ee, n'ihi na ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, anyị kpebiri ịkụ nzọ dị larịị maka ntụgharị 37, na-akụ nzọ mgbe niile na Red, ihe gbasara nke puru inweta nke "opekata mpe" 18 spins abụghị 50%, mana 56%!
I nwekwara ike ịlele a na ndị ọzọ na-ekwe omume n'ịgwa, na-eji free software ►Turbo Bet Calc.
Nke mbụ, m mere dochie m echiche otu nzọ na a sortie ugboro nke 48,65% na a usoro nke nzọ, nke n'ozuzu nwere a ugboro ugboro dị nnọọ elu karịa 50%.
Njem Ego ọ bụ ya mere na-emeri nchikota kpebiri site na ihe ọkpụkpọ, mgbe ọnọdụ zutere na X nzo na Y spins na-merie.
Agbanyela mgbagha eji usoro nghazi Masaniello a maara nke ọma, n'ezie myirịta dị ọtụtụ, mana na Money Trip, osisi ahụ anaghị akwụ ụgwọ na osisi, dịka otu osisi.
Ego njem: sọftụwia ahụ
Na anyị ► video ọwa ị ga-ahụrịrị ụfọdụ vidiyo na-egosi otu esi akwọ ụgbọ egwuregwu anyị iji nweta mmeri achọrọ, agbanyeghị, ka anyị bido site na nhọrọ ndị dị mkpa iji ghọta otu esi eme ọtụtụ ihe ngwa ọrụ a dị egwu anyị nwere.
Ozugbo meghere, Njem Ego ọ na-abịa na eserese na ụdị GPS navigator n'ezie, ebe n'aka ekpe nke dashboard anyị na-ahụ ntọala ntọala nke njem ahụ, ebe n'aka nri enwere ozi dị mkpa iji ruo mmeri achọrọ.
Ka anyị malite ozugbo na aka ekpe panel: n'ọhịa Mpụ (gbanwee) uru 37 ka edozila, nke ya na nghota zuru oke nke nọmba roulette, nke bu 37.
Ugbo ekpe na-egosi (ya mere enweghị ike ịgbanwe) ọnụọgụ ntụgharị fọdụrụ na njedebe nke okirikiri ma yabụ doro anya na-ebelata site na 1 na nzọ ọ bụla.
N'ọhịa Unit Uru anyi aghaghi iba uru nke anyi isi nzọ, nke nwere ike ịbụ euro 1 (yabụ anyị hapụrụ 1), ma ọ bụ euro 5 (yabụ ị ga-etinyerịrị uru 5).
Il acha anụnụ anụnụ ozugbo n'aka nri (nke nwere ego) na-eje ozi maka ịgbakwunye nkeji anyi choro iji merie na igbe Target (na aka nri), ọ ga-abụ na omume njedebe ikpeazụ nke njem anyị, ma ọ bụ mmeri anyị chọrọ iru.
Yabụ ọ bụrụ na achọrọ m inweta 10 euro na-eji otu nkeji nke euro, aga m abanye 1 bara uru na mpaghara Unit Value ma pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ ugboro iri iji bulie uru a ga-emeri na nke m ga-ahụ ka a kọrọ na Target n'aka nri.
N'ọhịa Bet obere M ga - abanye nzọ kacha nta nke enyere na tebụl nke m na - egwu (ejiri gbakọọ ịkụ nzọ) na n'ọhịa Bet Max Agaghị m abanye n'uko okpokoro, kama nzọ kacha nke m kpebiri ịme.
Tọ nzọ kachasị dị ka ị ga-ahụ bụ isi, nke mbụ n'ihi na n'ụzọ ụfọdụ anyị na-anwa ịnọ nke ọma site na njedebe nke ịgba chaa chaa (nke nwere ike ịdị elu karịa, mana n'ọnọdụ ọ bụla ka ị na-ebuli otu ịgba egwu ahụ ọ ka njọ, n'ihi na ịbụ ndị mmadụ n'otu n'otu nọ na-akụrisị, n'oge na-adịghị anya ihe ọ bụla nwere ike ime anyị), nke abụọ n'ihi na, dịka ị ga-ahụ, ọ bụrụ na nzọ dị nso na njedebe anyị, ọ pụtara na nnọkọ ahụ na-aga nke ọma ma ya mere onye na-akwọ ụgbọ mmiri anyị adọ aka ná ntị anyị banyere ihe ize ndụ, na-atụ aro 3 nhọrọ egwuregwu nwere ike nke anyị ga-ahụ nke ọma ma emechaa.
O doro anya na ịnweghị ike igwu egwu na euro 5 wee tinye nzọ kacha elu nke euro 7,5 (na nyocha mbụ m mere ya ma n'eziokwu m wee pụọ n'okporo ụzọ mgbe m gachara akụkụ ole na ole), ka anyị kwuo nke ahụ a mma ruru maka kacha nzọ bụ 10 ugboro isi unit, nakwa dị ka a Target ezi uche ga-ga- 50% nke bankroll, nke mere na n'aka nke ga-dịkarịa ala okpukpu abuo.
Yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwa mmeri dịka ọmụmaatụ euro 25, maka njem anyị, anyị ga-achọ ụlọ akụ nke euro 50, na-egwu na Nchịkọta 0,5 na fanye Bet Max 5 euro (yabụ okpukpu iri nke isi).
Ka anyị gaa n'ihu nyocha nke ogwe aka ekpe: Ohere Nhọrọ na-eje ozi iji họrọ ụdị ọgụ anyị chọrọ iduzi.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mbido mbụ anyị iji merie 18 n'ime 37 adaala n'ihi na anyị eruola nzọ kachasị ma ọ bụ na-agwụ ike 37, ma ọ bụ karịa naanị anyị kpebiri na ọ ka mma ịgbanwe ọgụ ahụ n'ihi uru Merie% n'aka nri dị nso na efu (a bara uru a iji ghọta otu esi etinye anyị n'oge njem ahụ, na omume ọ bụ ezigbo pasent nke ohere anyị iji merie agba ndị ọzọ iji ruo ihe mgbaru ọsọ ahụ), anyị nwere ike ikpebi ịgbanwe usoro ma bido ọhụụ ọhụrụ 37 na-agba ọsọ na ohere dị mfe, ma ọ bụ gbanwee egwuregwu ahụ kpamkpam wee gaa na nzọ na iri na abụọ, isii ma ọ bụ otu n'ime nhọrọ ndị ọzọ dịnụ.
Kedu nhọrọ m họọrọ, ọ ka ga-abụ ihe omume na puru omume dị nso na 60% ma yabụ enweghị ike ịchere ogologo oge!
Na omume, a ga-achịkọta usoro anyị dị ka ndị a: Ana m agbalị igwu egwu dị ka o kwere mee na m na-anwa ịme nzọ n'okpuru Bet Max, ruo mgbe m ga-ezute nnọkọ dị mma (nke ọnụ ọgụgụ na-agakarị karịa ndị ọjọọ) nke na-eme ka m mechie egwuregwu ahụ.
Nke a bụ egwuregwu nke ndidi, ná nkezi, ọ na-ewe ma ọ dịkarịa ala oge 3 iji ruo nkwụsị ma mgbe ahụ ihe dị ka elekere 1 nke egwuregwu mgbe ọ na-aga nke ọma, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịme ọtụtụ ule (naanị na ndu roulette doro anya) iji ghọta nke ọma omume niile ndị ọkpụkpọ nwere ike ime iji ruo ihe mgbaru ọsọ ya.
Oge ọ bụla ọhụụ ọhụụ malitere, pịa Igodo kpakpando, nke a na-eji gbakọọ ọnụ ọgụgụ ntụgharị na akụ na-adị mkpa iji mepụta ihe omume nwere puru omume karịa 50%.
Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na dị ka ọgụ na ị chọrọ họrọ ọtụtụ ma ọ bụ ogidi, na ịpị Star bọtịnụ ị ga-ahụ na a egwuregwu ụzọ ga-eme nke maka 37 spins nwere ihe puru omume nke 44% na nke a nke ahụ adịghị mma, iji dozie, tinye 50 kama 37 na Spins ubi wee pịa na Star, ị ga-ahụ na ihe gbasara nke puru omume ga-ebili na 58% kachasị mma, yana 16 hits iji merie na 50 spins.
Maka ogbugba ọ bụla meriri ma ọ bụ furu efu, ị ga-emerịrị ka pịa bọtịnụ ahụ Win e furu efumgbe m nọ n'ọhịa RNG pdị anyị nwere usoro aghụghọ maka ịkụ nzọ anyị ga-ekwe omume.
O doro anya na ọ bụghị ibu, ma m na-eji ya eme ihe n'ihi na edoziwo m ya n'ụzọ na-atụ aro nzọ efu, mana ịgbanwe naanị mgbe ị tufuru nzọ.
N'ụzọ dị otú a, i nwere ike zuru uru nke ọ bụla consecutive strok merie na ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe ngosi video nke Njem Ego na ► video ọwa nhọrọ a wee bụrụ ezigbo uru, ọkachasị na mwakpo nke atọ na iri na abuo / ogidi.
N'ikpeazụ, na nchịkọta aka nri anyị na-ahụ:
AkeUgbo: nguzo nke bankroll anyị (na-amalite mgbe niile site na mbido njem);
ArTọge: ole ka anyị ka ga-emeri ma e jiri ya tụnyere ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ (na-ebelata mgbe anyị na-emeri ma na-abawanye mgbe anyị tufuru);
Ha na: ọnụ ọgụgụ nke gbaa iji merie iji ruo n'isi;
Merie%: anyị puru nke iru agbaru ugbu a tranche;
Betzọ nzọ: ego ịkụ nzọ na ntụgharị ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmụ etu esi anya ụgbọ ala gị n’ụzọ kacha mma ma were ya gawa ebe ị na - aga karịa, cheta na:
Adịla na ọsọ ọsọ, amalitela egwuregwu ma ọ bụrụ na ịnweghị opekata mpe elekere ole ị nwere, mee ka à ga-asị na ị ga-ebufe narị kilomita abụọ n ’ọnọdụ ihu igwe enweghị atụ, yabụ na ị ga - amụta ịkwọ ụgbọala jiri nlezianya na mmiri mmiri, itinye ụdọ mgbe snow na ịpịsi ike na ngwa ngwa mgbe anyanwụ mechara pụta.
Oge ọ bụla (na ọ na - eme) na ị ruru Bet Max ha nọ ebe ahụ 3 nhọrọ: 1 - ịmalite ọhụụ ọhụrụ site na ịchọta otu ohere ahụ, 2 - ịmalite ọhụụ ọhụrụ site n'ịgbanwe ohere, 3 malite ọhụụ ọhụrụ site na ịba ụba ọnụ ọgụgụ ntụgharị igwu egwu.
Nhọrọ ndị a niile nwere otu ebumnobi: wedata nzọ nzọ.
Ya mere, ọ dị onye ọkpụkpọ ahụ ịghọta oge ọ na-agabiga na ịnabata (ma ọ bụ opekata mpe) ụzọ kachasị mma iji gaa n'ihu njem ya maka ebumnuche kwesịrị ya.
M ukwuu nwere ike ikwu, mgbe na-agụ dum post ọma, na-na-ekiri vidiyo na anyị ► maapu, nnọkọ kwara na vidiyo na-emekwa ka mma na eziokwu ihe m gbalịrị ịkọwa ebe a n'okwu.
Nwee anụrị Njem Ego echefukwala ịdenye aha na ọwa Telegram ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụchalụ akụkọ niile dị na mmemme ahụ.
Nbudata Nbudata	MTrip.zip - 2 MB
Oghere Sentinel 2
Oghere Sentinel 3